Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 37
July 7, 2020 Dekadaha Garacad iyo Hobyo
July 6, 2020 Kiimikada waxa-nool
July 5, 2020 Muxuu Xambaarsanyahay Bayaanka Manifesto 2?
Waxaa dhaqankeena ka maqan guud ahaan qiimaynta nolosha iyo fahamkeeda. Waxaa caadi ah inaan qofka Soomaaliga ah xirfad lahayn, isla markaasna uusan ka wal-walaynin ama uusan ku talagalayn nolosha soo foodsaari karto muddo yar kadib. Dabcan taasi waa dhaqanka miyiga iyo tacliin la’aanta oo isbiirsaday. Waxaa kalle oo ka mid ah, wax yaabaha inagu dhiiri galiyay xirfad la’aanta iyo shaqo la’aanta hantida iyo khayraadka waddanka Soomaaliya oo aad u badan, oo ka badan dadka ku nool dalka Soomaaliya. Taasi waxay keentay in si sahlan loo noolaan karo. Waxaa badan inaan qorsho loo samaynin arimaha guurka. Wax la yaab leh ma …
Guddomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday Dagmada Dharkeenley oo ku saabsaneed aruurinta canshuuraha guryaha oo dhowaan bilowday Dowladda Hooseee Muqdisho ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin in wadooyinka Caasimadda ay u xirnaadaan shaqsiyaad iyo hey’ado. Wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa la arkaa iyagoo ay ku xeran yhiin dhagxo shub ah iyo saan-baagyo waa weyn, kuwaasoo ay dhigteen hey’ado dowli ah, kuwo qaas ah iyo hotelo, waxaana Guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu sheegay in mudoo kooban uu ku qaadi doono dhamaan jidgooyooyinkaas, isagoo xusay in la tixgalin dono …